Call Center မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် တစ်ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မယ့် Mobile E-mail Service ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Android App » Call Center မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် တစ်ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မယ့် Mobile E-mail Service
Call Center မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် တစ်ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မယ့် Mobile E-mail Service
Friday, August 02, 2013 Android App
Call Center မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် အနေနဲ့ တစ်ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မယ့်
Mobile E-mail Service ၀န်ဆောင်မှုကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ စတင်
အသုံးပြု နိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ စနစ်မှာ အင်တာနက် လျှောက်ထား ပြီးဖြစ်တဲ့ CDMA, GSM Mobile ဖုန်းတွေသာ အသုံးပြု နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် အသုံးပြုခ ဖြစ်တဲ့ ၁ မိနစ်ကို ၂ ကျပ်၊ ၄ ကျပ်တို့ ပေးစရာ မလိုပဲ ရက်နဲ့သာ တွက်ပြီး ၁ ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ ၂၄ နာရီ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုလို သူတွေ အနေနဲ့ Call Center သို့ အသုံးပြု လိုကြောင်း Message ပေးပို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ပေးပို့ရာမှာ Call Center ရဲ့ ကုတ်နံပါတ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၁၈၈၃ ကို GET MAIL ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ စာလုံး အကြီးများ အသုံးပြုကာ သုံးစွဲမယ့် သူရဲ့ အင်တာနက် Account နဲ့ Passward ကို ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုခ ကိုတော့ ဖုန်းဘေလ် ထဲမှ ဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သုံးစွဲပုံ အသေးစိတ်ကို သိရှိလိုပါ ကလည်း Call Center သို့ စုံစမ်း မေးမြန်း နိုင်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ ၁ ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ ၁ လစာ ၆၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ် ထားပြီး အသုံးမပြု လိုတဲ့ ရက်ရှိပါက Call Center သို့ ကြိုတင် အကြောင်းကြားပြီး Server ပိတ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်း မကြားပါက တစ်လစာ အတွက် ကျပ် ၆၀၀၀ ကို မိမိဖုန်းဘေလ် ထဲက ဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုကို ယခုဇွန်လ ကုန်အထိ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုခ ကောက်ခံမှု ကိုတော့ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ကောက်ခံမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
Media Player GOM Player 2.2.53.5169 (exe)
Magic Neo Wave – Galaxy Note2ဒီဆော့ဝဲလေးကလည်း မ...
ကွန်ပျူ တာကို သန့်ရှင်း ပေါ့ပါးစေမယ့် Auslogics Bo...
android ဖုန်းတွေပေါ်မှာ email နှင့် JPEG, PDF docum...
The Real Thunderstorm – Live Wallpaper
Airplane Toggle Widget
Windows ကို Android Phone ကတင်မယ်
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ လေ့လာလိုသူများအတွက် E-Book စာအုပ်...
သင့် ဖုန်းScreen ကို customizeလုပ် အလှဆင်နိုင်တဲ့ ...
ကျွန်တော်တို့Android deviceတွေရဲ့ Home screen oAn...
18 ပြည့် ပြီး ယောကျား လေး များ သာ ဒေါင်း ပါ ။ ၁၈ ...
Huawei C8813 Network line error ရှင်းနည်းလေးပါ
Root လုပ်နိုင်တဲ့ update.zip တည်ဆောက်နည်း နှင့် fo...
iPhone မှာ SMS Center ထည့်နည်း
Android Phone Brand ပေါင်း ( ၁၀၀၀၀ ) ကို Root နိုင...
Postcard လေးတွေလုပ်လို့ရတဲ့ apk လေးပါ...
Huawei C8813 ကို GSM Sim ထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း ပ...
ဖုန်းတွေမှာ Screenshot ရိုက်ကြတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
အရမ်းလန်းတဲ့ Animated Widget Contact Pro v1.7.0 AP...
အီးပေါက်သံတွေ နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်ရအောင်
ANDROID ဖုန်းတွေအတွက်နည်းပညာဆိုဒ်ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ ...
ScreenSteps Pro v2.9.6 Build 11 + Serial & Keygen
အလန်းဇယား Live Wallpaper လေးပါ - Next Time Tunnel ...
Ocean HD Live Wallpaper v1.6 apk For Android
Root လုပ်ထားတဲ့ android user တွေအတွက်အသုံးဝင်စေဖို...
24-May နောက်ဆုံးထွက် Android Application (15မျိုး)...
iOS7style icon လေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ခ...
NTI CD & DVD Maker 7.0 + (Crack , Patch , Serial)
Virtual CD v10.5.0.1 + Key
Android Appilications များနဲ့ Games များကို Window...
Android ဖုန်းများအတွက် Action Game လေးတခုပါ။
အင်္ဂလိပ်သီချင်း(၁၂)ပုဒ်ပါဝင်တဲ့ CD Software လေးပါ။
Google Play မရှိလဲ google play မှာ App များစွာဒေါင...
အွန်လိုင်းမှ ဗိုင်းရပ်(စ်)များမဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးမ...
စွန့်စားခန်းတွေ နဲ့စစ်တိုက်ရတဲ့ ဂိန်းလေးပါ
Google Servies app များသွင်းဖို့အတွက် Smart GApps ...
ဒီဆောဝဲလေးကတော့ andriod ဖုန်းတွေမှာ photo siteshow...
TSF Shell (for andriod laucher)
ဖုန်း ရဲ့ application icon တွေကိုမြန်မာစာပြောင်းချ...
andriod ဖုန်းတွေ Ringtone လုပ်ဖို့ MP3 ဖြတ်တဲ့ ဆေ...
MP3 Cutter Ringtone Maker (for andriod phone)
ဖုန်းထဲက သီချင်းသံကို နှစ် ဆ ကျယ်လာစေမယ့် Sensor m...
Adobe® Photoshop® Touch ( For Andriod Phone)
ITag Pro (Andriod ဖုန်းထဲမှာ Mp3 တွေကို Ablum Name...
ဖုန်ခေါ်ရင် တည်နေရာကို ပြပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
Window XP Mod Launcher
Armor for Android™ Security Full Version (for andr...
အင်တာနက်လိုင်းတွေ မကောင်းတော့ ကျွန်တော်လဲ သိပ်ကြီး...
Respawnables V1.5.2 (GPK)
သူငယ်ချင်း ချစ်သူကို နည်းလမ်းတကြ နမ်းတတ်ပါသလား မန...
ပေါ့ပါးပြီးအလန်းလွန်တဲ့ Buzz Launcher 1.0.3.6 (New...
Spoof Caller v2.1 APK ( 946KB )
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် သချာင်္တွက်လို့ရတဲ့ ဆေ...
ကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းဆော့ဝဲ(လ်)လေးတွေ အမှန်တကယ်ပေါ်စေမ...
နောက်အသစ်ထွက်ရှိတဲ့ v-root ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ
Android phone နဲ. ဖေ့ဘွတ်သုံးရင်း auto logout ဖြစ်...
Bo Bo Flashs Download ဒေါင်းရန် ဘိုဘို ဂိမ်း များ
Android သမားတွေ အတွက် ဖေ့ဘွတ်က ဓါတ်ပုံ ၊ ဗွီဒီယို ...
ကွန်ပျူတာမှာ Error ပေါင်းစုံကို တပြိုင်ထဲ ဖြေရှင်...
မြန်မာ Mobile application များကို စုစည်းမှု့ (Andro...
ဖုန်းငွေကဒ်ကို လက်ညောင်းခံရိုတ်ထဲနေစရာမလိုတော့ပဲ အ...
ဖုန်း pattern lock ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများကို တစ်နေယ...
မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း apk
Troll ဟာသဂိမ်း Apk For Android
မိမိဖုန်းရဲ့ အရှေ့ကင်မရာမှာလက်လေး ယမ်းလိုက်ရုံနဲ့ ...
1-Click Phone to Phone Content Transfer!
ဂိမ်းဝါသနာရှင်များအတွက် အပျင်းပြေ Ice Age2- The ...
WINDOWS 8.1 မှာ သင်မသိသေးတဲ့ FEATURE သစ်များ
ပုံမြင်ရင်တော့ သိလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော် ဘာဆော့ဝဲမှန်း ...
android သမားတွေ အတွက် ဖွက်ချင်တာ သူများမကြည့်စေချင...
flashsongs ကို mp3 ပြောင်းလဲခြင်း
အပြင်မှာ မကြေနပ်တဲ့ကောင်ကို ဖုန်းထဲမှာ ထဲ့ပြီးအမုန...
ဖုန်းအဝင်မှာ Video လေးတွေနဲ့ လန်းချင်ရင် ဆော့ဝဲလေး...
အခွေ Burning လုပ်ဖို့အတွက်ဘာဆော့ဝဲမှမလိုဘူး လုပ်နည...
သူငယ်ချင်းတို့ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖလက်သီချင်းလေးတွေကို m...
Call Center မှ ၀န်ဆောင်မှု အသစ် တစ်ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်န...
GSM ဖုန်းတွေအတွက် Call Waiting နဲ့ Call Forwarding...
VLC player လေးပါ
Talking PSY ဟာ Opa Gagnam Style သီချင်းနဲ့ နာမည်ကေ...
“18+++ နော်” Oh ! My God လို့တောင် လွှတ်ကနဲထွက်သွား...
Samsung Galaxy Mega 6.3 - GT-i9205 ( Myanmar Font ...
Samsung Phone Model တော်တော်များများ root လို့ ရမယ...
How To Root Samsung Galaxy Mega 6.3 GT-I9205 LTE
Samsung Galaxy Mega 6.3 (GT-I9205 & GT-I9200) Root...
Huawei Version 4.1.1 တွေအတွက် Theme တွေပြင်မယ်
360 China One Click Root Tool
Galaxy Mega GT-I9205 v4.2.2 Root လေးပါ